nezinsuku Okokuqala ezingadala ukushintsha izimpilo zethu. Ngiyaqaphela ukuthi uma ubhekene njengamanje ulungiselela omunye, I cishe kwenza isisu sakho flip, futhi ngenxa ukuthi ngixolisa! Indlela engcono ukungena usuku lokuqala iwukuba uphumule, ngakho ukhohlwe wonke isici ezishintsha ukuphila kwayo. Kunalokho, ake sigxile ingxoxo.
Izikhathi eziningi, sicabanga izinsuku zokuqala like umsebenzi izingxoxo, okuyinto ngokuqinisekile ubeka isimo sokuthi ngeke ngokuphelele lesilungele for fun, futhi ukusabela ezivamile kuya interview Umsebenzi ukwethuka, kwesokudla? Uma senza uku kwemizwa, ngezinye izikhathi sikhohlwe esibucayi kakhulu ithuluzi inkulumo njengoba esinayo: ukulalela.
Lokhu kungase kuzwakale njengento elula, kodwa kungcono kwaphela ngokumangalisayo ezweni lanamuhla. Sigxila kakhulu kangangokuba ekulungiseleleni inkulumo yethu behlakaniphile noma ukulethwa ophelele sidebeselela kutsha ngokugcwele ukuze omunye umuntu. Ngalalela eziningi umuntu omkhulu-liner, futhi ngiyamthanda funny guys, kodwa kuthiwani guy empeleni ulalela lokho enikushoyo? Well, yena kumlindi. Uma yena funny, futhi, ke uke sina hit the jackpot.
Amadoda afuna owesifazane ozokulalela, too! Ngithathe alikhulumi nje ngokuzwa amazwi uthi, nakuba lokho yisinyathelo sokuqala esibucayi. Empeleni lalela amazwi akhe, iphimbo lakhe, umzimba wakhe ulimi, nezenzo zakhe. Abesifazane bavame ukuba banake lezi zinto kahle kakhulu, kodwa ngezinsuku zokuqala, thina oftentimes get wayegxile ngokwethu (nokugqoka kwethu, izinwele zethu, ukudla in amazinyo ethu, Ngubani amazwe, futhi lipstick reapplications) ukuthi sikhohlwe ukuthi kungani thina uku ngempela.
Ukulalela usuku lwakho ngokuyenza okuqinisekisiwe ukusiza ukugeleza ingxoxo. Emakhono ekulalelisisa Bad, Thayipha A Ubuntu? Nakhu ifomula:
1. Umbuzo: Uma usuku izingxoxo zakho mayelana imisebenzi umsebenzi noma izithakazelo siqu ukuthi abaqondi, noma oda okuthile off the menu uke ngizwe, ungazizwa ezibuza imibuzo silly. Buza away. Abantu abathanda ukuba achaze lokho akwaziyo okuningi mayelana, futhi uke waphenduka nje usuku lwakho zibe uchwepheshe, kungakhathaliseki ukuthi kungcono on ezinjinini zezimoto noma sushi. Ongafuni ukuzizwa like an expert? Sithambekele ekukhulumeni kakhulu mayelana izinkanuko zethu, ngakho uya umazi lowo muntu ngendlela ezuzisayo.
2. Misa: Ukuvumela usuku nesikhathi sakho ukuze uqedele imicabango yakhe indinganiso pretty - futhi kungaba nzima ukufakazela uma uku ejabulile noma wethuke - kodwa ukuthatha it isinyathelo esisodwa phambidlana ngempela ukunikeza ulwazi. Enye indlela enkulu yokwenza lokhu kuthatha ungiphuzise amanzi njengoba umuntu uqedela umcabango. Inikeza abantu kwathula ukuze ugcwalise, futhi izikhathi eziningi uthola ukwazi okwengeziwe ngabo kulezi inclusions.
3. Uyevelana: Mhlawumbe nje waqeda izifundo zakhe, noma mhlawumbe yena up lokukhushulwa. Cabanga indlela obungazizwa ngayo uma abakulesi simo. Cishe ufuna ukukhuluma amakilasi zakho ozithandayo, lokho ofuna ukukwenza in the field, noma amaphrojekthi uke wasebenza phezu ukukhuphuka isitebhisi. Manje unemibuzo omkhulu. Lesi kuba yisikhathi lapho isimo sengqondo sobugovu kungaba lusito kakhulu ekufundeni omunye.
4. Phinda: Uma ukhathazekile ngakho futhi ngikha-thazeke ngokuthi une broccoli washaya amazinyo nje abakwazi ukugxila imininingwane yomsebenzi wakhe ngesikhathi kokuzizwa zifa ngoba icwecwe esikhwameni sakho, okungenani kakhulu balinge on amagama ayisihluthulelo. Ingabe uJesu athi kufakwa? Manje ungabuza imibuzo mayelana nokuthi yiluphi uhlobo idatha, uma lokhu kuyinto iyamthanda, noma uma esebenzisa ukuthi amanani mass caffeine ukuze bakwazi ukuyimela. Kodwa iqiniso liwukuthi, ukhohlwe icwecwe uma unga, futhi nje bambuze!
Kunjalo, ukubuza imibuzo mayelana pet usuku lwakho(s) Kunconywa. Not nezilwane? Hlola, Ngiyacela. Ngithi lokhu (futhi uhlobo sina.)
Jabulela usuku lwakho lokuqala, nethezeka, futhi nijabula! khumbula nje ukulalela. Impilo yakho empeleni ushintsho, kodwa hey, no ingcindezi.
Uma ubona umngane wakho ubuka njengoba i extension kini, kungenzeka ukuthi uma inja yakho ayithandi yakho ...